EMUI 10: Ogow dhammaan wararka ku saabsan lakabka habeynta | Androidsis
EMUI 10 hadda waa rasmi: Ogow dhammaan wararkeeda
Dhowr toddobaad ka hor ayaa la xaqiijiyay in shirkadda Huawei ay abaabulayso a shirkii hormarinta horraantii Ogosto. Dhexdeeda, soo saaraha Shiinaha Waxaan u soo bandhigi lahaa EMUI 10 si rasmi ah, lakabkeeda qaabeynta cusub ee ku saleysan Android Q. Toddobaadyadan la soo dhaafay faahfaahinta ku saabsan ayaa la daadinaayay, taas oo nooga tagtay fikrad ah waxa laga filan karo.
Laakiin ugu dambeyntii, maalintii ayaa timid. EMUI 10 durba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay, sidaa darteed waxaan ognahay warka ah in noocan cusub ee Huawei ee lakabaynta qaabeynta uu naga tagayo. Shirkadda ayaa horeyba ugu soo bandhigtay dhammaantood shirkii horumarinta.
1 Habka mugdiga ah ee EMUI 10
2 Xiriir cusub oo ka socda EMUI 10
3 Qaabka gaariga
4 Ku xirnaanta aaladaha kale
5 Shaashad Quful
6 Had iyo jeer Soo Bandhig
7 EMUI 10 Telefoonada Iswaafajiya
Habka mugdiga ah ee EMUI 10
Sida ku dhici doonta Android Q, waxaan ka heleynaa xaalad mugdi ah EMUI 10. Nooca Shiinaha ayaa ku dhawaaqaya in muuqaalkan loo soo saaray asal ahaan, si nidaamka iyo codsiyada nidaamka ay u qaataan midabkan mugdiga ah. Intaa waxaa dheer, waxay xaqiijiyeen in codsiyada dhinac saddexaad ay sidoo kale helaan qaabkan mugdiga ah. Waxay ku madoobaanayaan hab caqli badan.
Xaaladdan mugdiga ah sumaddu waxay rabtay inay bixiso fiiro gaar ah in wax walba la akhrin karo. Waxay ka faalloodaan inay tahay wax si gaar ah loogu fiirsaday. Sidaas darteed isdhexgalka ayaa wali ah mid la aqrin karo oo si fudud loo isticmaali karo marwalba qaabkan mugdiga ah.
Xiriir cusub oo ka socda EMUI 10
A interface cusub qaabkan cusub ee lakabka habayn. In kasta oo ilaa hadda si dhib yar aan u awoodnay inaan wax ka aragno iyada. Waxay umuuqataa inay sharad ku galayaan shebekad dhex marida qeybta hoose ee daaqada. Intaa waxaa sii dheer, EMUI 10 waxaan sidoo kale ka heli doonnaa far waaweyn, khadad fudud iyo waliba animations cusub. Animations-yada cusubi waxay noqon doonaan kuwa firfircoon oo siman kiiskan.
EMUI 9.1: Dhammaan wararka ku soo dhacaya telefoonnada
Android Auto wuxuu hadda helaa nooc u gaar ah EMUI 10. Lakabka shakhsiyeynta ee Huawei wuxuu soo bandhigayaa HiCar, taas oo kuu oggolaan doonta inaad ku xirto taleefanka gaariga iyo marwalba. Markaad sidan sameysid, waxaad heli doontaa howlo taxane ah, sida hagaajinta muusikada aad dhageysaneysid, socodka gawaarida waqtiga dhabta ah ama awood u lahaanshaha inaad shiddo qaboojiyaha kahor intaadan soo galin, iyo howlaha kale.
Ku xirnaanta aaladaha kale
Muuqaal kale oo muhiim ah kiiskan ayaa ah isku xirnaanta ama isku xirnaanta aaladaha kale. EMUI 10 waxaa lagu soo bandhigay qaabkan si loo fududeeyo abuurista nidaamka deegaanka ee Huawei. Maaddaama taleefanka lagu xiriiri karo hab fudud oo leh aalado ay ka mid yihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama kuwa ku hadla magaca smart. Ku xirnaanta kombiyuutarka sidoo kale waa la hagaajiyay.
Xaqiiqdii, xaaladdan ayaa ah halka aan ka helno waxoogaa horumar ah oo soo-saaraha ah. Mid ka mid ah shaqooyinka xiddiggu waa isku xirnaanta ugu fiican mahadsanid saadaasha kumbuyuutarka. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad faylalka u jiido shaashadda taleefanka gacanta. Si aan nuqul uga sameysan karno inta u dhexeysa labada aaladood, labada jiho.
Sirdoonka macmalka ah wuxuu sii wadaa joogitaanka EMUI 10. Xaaladdan oo kale, sumadda Shiinaha ayaa adeegsaneysa si ay u falanqeyso waxyaabaha ku jira fkuwa kale ayaa lagu soo bandhigay shaashadda qufulka. Sidan oo kale, qoraalka ay tahay in lagu soo bandhigo shaashadda ayaa loo dhigayaa hab aan daboolin waxa ku jira. Kaas oo kuu oggolaanaya inaad si fiican uga faa'iideysato shaashadda. Waxay u maleyneysaa in qoraalka laga yaabo inuu beddelo goobta ku saleysan sawirka shaashadda qufulka.
Had iyo jeer Soo Bandhig
Had iyo jeer qaabka Muuqaalka waxaa lagu cusbooneysiiyaa EMUI 10 kiiskan, loogu talagalay taleefannada Shiinaha ee leh shaashadda OLED. Habkaani wuxuu hadda bixinayaa sawirro taxane ah oo cusub, oo ah kuwa ugu midabbada badan, oo lagu qurxinayo taleefanka markii aan la adeegsanayn. Naqshadaha saacadaha cusub ayaa sidoo kale la bixiyaa, iyo sidoo kale qurxin cusub oo arrintan la xiriira.
EMUI 10 Telefoonada Iswaafajiya
Huawei wuxuu ku dhawaaqay EMUI 10 beta Waxaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa Sebtember 8. Waqtigan xaadirka ah, soo-saaraha ayaa horeyba nooga tagay taleefannadii ugu horreeyay ee la jaan qaadi doona. In kasta oo waxa caadiga ahi yahay in liistadu aad u ballaadhan tahay, laakiin waxay u muuqataa inay kuwani yihiin aaladaha marin u heli doona beta-kan marka hore. Sikastaba, waxaan sugeynaa warar dheeri ah.
Telefoonada marin u heli doona EMUI 10 beta bisha Sebtember waxay kala yihiin: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 Porsche Design, Huawei Mate 20 X, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Honor V20 iyo Honor Magic 2. Waqtigan xaadirka ah iyagu waa kuwa keliya kuwa ay soo saaraha Shiinuhu xaqiijiyeen, laakiin hubaal toddobaadyadan ama ka dib markii la bilaabay beta-kii ugu horreeyay, inbadan ayaa laga ogaan doonaa taleefannada kale, Huawei iyo Honor, oo laga yaabo inay marin u helaan. Ma jiraan taariikhyo la sii daayo nooca xasilloon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » EMUI 10 hadda waa rasmi: Ogow dhammaan wararkeeda
HarmonyOS: Nidaamka hawlgalka ee Huawei waa mid rasmi ah